भैफलो हम्प के हो र यसलाई कसरी छुटकारा दिने बेजिया
टोय टोरेस | 20/07/2021 20:00 | स्वास्थ्य सल्लाहहरू
उमेरका साथ शरीर परिवर्तन हुन्छ, कहिलेकाँही असहनीय र सबै भन्दा माथि, सायद यसलाई साकार नगरी। ती परिवर्तनहरू मध्ये एक प्रायः हुने गर्दन क्षेत्रमा एक प्रकारको कुबुर देखा पर्दछ। उसको वास्तविक नाम ग्रीवा कीफोसिस होयद्यपि यसलाई भैंस हम्पको रूपमा पनि चिनिन्छ।
के तपाइँसँग घाँटीमा यो सानो टक्कर छ र तपाइँलाई यसबाट मुक्त हुन के गर्न थाहा छैन? हामी तपाईँलाई अहिले नै बताउँछौं किन यो बाहिर आउँछ, यसलाई कसरी हटाउने र आसन सुधार गर्न तपाईं व्यायाम गर्न सक्नुहुन्छ तिम्रो पछाडिबाट यद्यपि यो गम्भीर रोग होइन, केही आन्दोलनहरू गर्दा यो असहज हुन सक्छ।
मलाई थाहा छ किन यसले तपाईंलाई एक सौन्दर्य स्तरमा परेशान गर्दछ, किनकि यसले उत्पादन गर्दछ पछाडि असुविधा वा किनभने यो केवल तपाईंको आसन सही हुनबाट रोक्दछ, हामी तपाईंलाई यो समस्या कसरी सुधार गर्ने भनेर सिकाउँछौं। बफेलो हम्प के हो पत्ता लगाउनुहोस्, कसरी तपाईं यसलाई सच्याउन सक्नुहुन्छ र यसको पुन: देखा हुनबाट रोक्न तपाईंले के गर्नुपर्छ.
1 भैंस हम्प के हो?
2 कसरी बफेलो हम्प हटाउने
भैंस हम्प के हो?
बफेलो हम्प घाँटी क्षेत्रमा बल्ज वा घुमेको क्षेत्रको उपस्थिति द्वारा विशेषता छ। यस प्रकारको हम्प, यो बोसोको स accum्ग्रहबाट उत्पादित हुन्छ, यद्यपि यो रोगहरू द्वारा पनि हुन सक्छ अधिक गम्भीर, जस्तै अस्टियोपोरोसिस। यद्यपि कम्मर बाहेक रोगहरूको अवस्थामा पनि अन्य लक्षणहरू देखा पर्दछ, त्यसैले यो सँधै गम्भीर कुरासँग सम्बन्धित हुनुहुँदैन।
जे होस्, भैंस हम्प निम्न सुविधाहरूद्वारा भिन्न गर्न सकिन्छ:
मोटोपना: जस्तो तपाईले पहिल्यै देखिसक्यौं, भैंस हम्प फ्याटको संचयको कारण देखा पर्दछ, त्यसैले व्यक्ति जो अधिक वजन वा मोटा छन् यसका लागि उच्च जोखिममा छन्.
केहि औषधिहरूको खपत: ग्लुकोकोर्टिकॉइड ड्रग्सको साथ दीर्घकालीन उपचार, त्यो हो, कोर्टिसोन.
आनुवंशिक विरासत: हो तपाईको परिवारमा कसैलाई भैंसको हम्प छ, तपाइँसँग पनि यो अधिक सम्भावना छ।
खराब आसन: मेरुदण्डको गलत आसन हो एउटा मुख्य कारण घाँटी को त्यो क्षेत्र मा बोसो जम्मा जो द्वारा। यसलाई सच्याउनाले तपाईंलाई यसबाट छुटकारा पाउन सक्दछ।
कसरी बफेलो हम्प हटाउने
बफेलो हम्प हटाउनका लागि बिभिन्न उपचारहरू छन्, स्थानीय वसा हटाउनको लागि लिपोसक्शन पनि। यद्यपि पहिलो कदम हो कारण पत्ता लगाउनुहोस् र यसको स्रोतबाट हम्पको उपचार सुरु गर्नुहोस्। यदि यो मोटोपनाको मामला हो भने, पहिलो कुरा भनेको स्वस्थ आहारको साथ सुरू गर्नु हो, आदर्श पोषण विशेषज्ञको निरीक्षणमा।
ती केसहरू जसमा कारण कमजोर आसनमा छ, एक फिजियोथेरापिस्टसँग सत्रहरू आवश्यक छ। तपाईंलाई बफेलो हम्प सच्याउनमा मद्दत बाहेक, यसले तपाईंलाई मुद्रा सुधार गर्न भविष्यमा दिशानिर्देशहरू र अभ्यासहरू प्रदान गर्दछ र भविष्यमा यसको पुनरुत्थान रोक्न। केसहरूको सम्बन्धमा जुन यसमा चिकित्सा उपचारको साथ गर्नुपर्दछ, एक विकल्प खोज्नको लागि विशेषज्ञको कार्यालयमा जानु आवश्यक छ.
सौन्दर्य उपचार बाहेक, त्यहाँ केहि निश्चित छन् धेरै प्रभावकारी अभ्यास भैंस हम्प हटाउन.
छाती लिफ्ट: भुँडीमा ओछ्यानमा राख्नुहोस् र आफ्नो हतियारहरू तपाईंको शरीरको छेउमा degree 45 डिग्री ए angle्गलमा राख्नुहोस् तपाईंको हत्केलाहरू माथि अनुहार राख्नुहोस्। तपाईंको मेरुदण्ड जहाँसम्म तपाईं सक्दो तन्नुहोस्, तपाईंको फर्शको बिरूद्ध पछाडि प्रेस गर्दै। अब, छाती उठाउनुहोस् जब तपाईको काँध ब्लेड निचोल्दै छ। १० सेकेन्डको लागि यो स्थिति समात्नुहोस् र मूल स्थितिमा फिर्ता जानुहोस्। १० प्रतिनिधिहरूको दुई सेटमा व्यायाम गर्नुहोस्।
आर्म लिफ्ट: आफ्नो शरीर भित्ता, टाउको, काँधहरू, हिल र श्रोणि विरूद्ध राम्रोसँग भित्तामा थिच्नुहोस्। भित्तामा तिनीहरूलाई स्लाइड गरेर आफ्ना हतियारहरू उठाउनुहोस्, जबसम्म तिनीहरू तपाईंको काँधमा स्तर हुँदैन। व्यायाम गर्दा, तपाईंले आफ्नो टाउको झुकाउनु हुँदैन वा आफ्नो काँध सार्नु हुँदैनयस तरिकाले तपाईलाई चोटपटकबाट बच्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक पटक १० प्रतिनिधिहरूको दुई सेट गर्नुहोस्।
प्रत्येक दिन यी अभ्यासहरू प्रदर्शन गर्नाले तपाईंको आसन सुधार गर्न र बिस्तारै बम्पो हम्पलाई बिस्तारै कम गर्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाइँ पनि एक पूरा व्यायाम प्रत्येक दिन, जस्तै पैदल, साइकलिंग या पौंडी जोड्नु पर्छ, तपाईं एक सामान्य तरीका बाट वजन कम हुनेछ। जसले घाँटी जस्ता क्षेत्रहरुमा फ्याट संचय को हराउन योगदान गर्दछ। तपाईंको खाना र व्यायामको नियमित ध्यान दिनुहोस्, तपाईंको शरीरले यसलाई कदर गर्नेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » स्वास्थ्य » स्वास्थ्य सल्लाहहरू » भैंसो हम्प के हो र यसलाई कसरी हटाउने